58 qof oo Ciidamada Ethiopia ay shalay xasuuqeen(Riix)
Guud Mar Dagaaladi Sokeeye ee Somaliya.(Aragti)(Riixn)
Qeybtii 25-aad Sheekooyinka lagu soo halqabsado ee murti ahaanta loo isticmaalo
Nin sabool ah
Beri baa nin tuugsade ah waxaa maalinkasta soo geli jirtay hal shilin. Halkaas shilin mana wayn jirin wax ka badanna ma soo geli jirin.
Berigii dambe ayuu arintaas saboolnimada ah aad uga xumaaday, wuxuuna naftiisa ku hiifay horta noloshaada aduunyo ma sidan ayaad ku dhameysan, marna ilaahay wax fiican ku siin mayo soow ma aha, intuu orday oo sart dheer fuulay ayuu yiri ilaahow horta aniga maxaad igu leedahay, shilinkii horta waa kaas ee cesho, maxaa kale oo iigu kaa haray dharkii xumaa ee duugga ahaana intuu iska siibay oo tuuray buu yiri ‘isaagiina waa kaase qaado’ maxaa iigu kaa haray, nafta soo maahan, iyadana haddaan kuu soo bixinayaa sidaa aan isku dhaafno, dabaqiina wuu iska tuuray.
Nasiib wanaag ma dhiman laakiin si xun buu u dhacay. Dadkii way qaadeen isbitaal bay geeyeen oo daweeyeen. Markuu soo miyirsaday ayuu yiri; halkani waa halkee, waxay ku yiraahdeen waa adduun iyo isbitaal dhexdii, intuu ku xanaaqay ayuu yiri; “Yaa I keenay meeshaan” waxay ku yiraahdeen “inagaa axsaan kuu samayna oo kuu gar-gaarnay” wuxuu yiri; “Anigu gar-gaar ma rabin oo inaan is dilo ayaan doonayey, ee shaqo aan la idiin dirsan baad qabateen, haddana nolol ma rabo oo waan isdilayaa.
Markiiba isbitaalka ayuu ka baxay oo duurka xagiisa ayuu aaday isagoo maanka ku haya in si uu yeelaba uu isdilo, waxaa ka hor yimid berni’aadam isu soo ekeysiiyey, wuxuuna weydiiyey halka uu u socdo, isaguna wuxuu u sheegay inuu doonayo inuu isdilo oo nolosha adduunyada uu nacay, wuu ka waaniyey, hase yeeshee wuu ka diiday. Malagii maraa wuxuu u tilmaamay ninkii jid, wuxuuna ku yiri; “jidkaa mar haddii aad rabto inaad dhimato” wuuna ka tagay.
Jidkii ayuu maray wuxuuna ugu tagay mas weyn oo jidkii isku gudbay. Maskii markuu ninkii arkay ayuu ku soo booday oo saynta ku dhuftay oo tuuray. Dudun meel fog ku taalay ayuu dalooladeedii mid ka mid ah madaxalagalay. Markaasuu wuxuu ku arkay dahab aad u fara badan. Halkii ayuu dahabkii iyo adduunkii uu meesha ku arkay iska soo gurtay, oo uu naagna ku guursaday adduuna ku tabcaday.
Calool adaygii Guure [iyada oo kale lama arag]
Guure waxa uu ahaa oday reer miyi ah, oo geesinimo iyo calool adag ku caan baxay. Maalin maalmaha ka mid ah isaga oo la sheekeysanaya saaxiibadiis ayuu waxa uu meel fog ka arkay
Sawir Nin garbo duuban oo niman soo wadaan
Niman si xun u jiidaya wiil dhalinyaro ah oo riixaya, markii ay u soo dhawaadeen waxa uu gartay in wiilka la soo jiidayo in uu yahay wiilkii walaalkii uu dhalay oo dharkii laga jeex jeexay garbo duubna loo xiray qaar ka mid ah maryihiisii.
Guure arintaas aad ayuu ula yaabay waxa uuna nimankii wiilka waday su’aalay. War maxaa dhacay? Nin nimankii wiilka waday ka mid ahaa ayaa yiri; [ kani waa wiilkii walaalkaa dhalay oo dilay wiilkaagii waxaana u soo garbo duubnay in loo qisaaso, Guure kama uusan kicin fadhigiisii mana doorsoomin wejigiisii laakiin weli wuu iska xasiloonaa, naftiisuna way deganayd, intuu nimankii wiilka garbo duubka u hayey eegay ayuu ku yiril [sii daaya wiilka oo xariga ka fura waayo isaga ayaa dilay adeerkiis, qaraabadiisana gacantiisa ku gooyey wiil kale oo meesha fadhiyey oo uu isaga dhalay ayuu ku yiri; [Daba orod oo hooyadaa uga tacsiyee geerida wiilkeeda, siina boqol halaad oo ah magtii wiilkeeda, walaalkaana soo aas. Ka dibna sheekadii saaxiibadiis ayuu halkii ka sii watay, dadkii la fadhiyey aad bay ula yaabeen geesinimada iyo calool adegyga Guure, waxa ay yiraahdeen [tan oo kale lama arag].
Qeytbtii 24-aad halkaan ka Aqriso
Lasoco Qeybta Xigta todobaadka Danbe ama Axada Danbe
Fiirio Gaar ah:
Waxaa Qorey Cabdulqaadir Nuur Xuseen (Maax)
Wixii talo ama fikrad ah oo la xiriira Buugyarahan
waxaad igala soo xiriiri kartaan Cinwaankayga ah:
Tel:00 2522-4150 622
© Arrow Online.com 2011®